Akụkọ - Ọrịa mgbochi na njikwa njikwa enweghị ike iru ala maka oge！
Ọrịa ahụ na-efe efe na-eche ihe ize ndụ nke "njikọta na njikọta atọ"
Kemgbe mmalite nke oge oyi, mmepe nke ọrịa ahụ echewo ihe ize ndụ nke "njikọta na njikọta atọ", ọnọdụ mgbochi na njikwa adịwanye njọ ma sie ike, ọrụ ndị ahụ na-agwụ ike ma na-agwụ ike.
Ọrịa zuru ụwa ọnụ na-enye ihe egwu nke "mgbanwe nwayọ" na "mmụba". Eke gburugburu ebe obibi n'oge oyi aghọọla usoro ikuku oyi. Ihe ọhụrụ coronavirus nwere ogologo oge lanarị, ọrụ nje siri ike karị, yana nnukwu ihe egwu ibute. Na mgbakwunye, mmụba nke nje amụbawanye ọrịa na nzuzo, na-ebute ntiwapụ nke agba nke atọ nke ọrịa na-efe efe n'ụwa niile. Kemgbe Disemba 2020, enweela ihe karịrị 600,000 ọhụụ ekwenyela n'ụwa niile, yana ihe karịrị 10,000 ọnwụ ọhụrụ, ha abụọ bụ ọkwa ọhụrụ kemgbe ntiwapụ ahụ.
Ọrịa a na-efe n'ụlọ na-enye ihe egwu nke ịrịa ọrịa na-agagharị agagharị na nke a na-agwakọta na mpaghara. Kemgbe Disemba 2020, mpaghara iri abụọ ekwuola na ọ bụ ọrịa ọhụrụ na-ebute ọrịa na ọrịa asymptomatic. N'ihe dị ka elekere iri abụọ na anọ na Jenụwarị 7, 2021, obodo m ekwuputala okwu ikpe 280, nke 159 gbakwunyere na izu gara aga. Ihe ikpe, ọkachasị ọrịa ndị mere na Shijiazhuang City, Province Hebei n'oge na-adịbeghị anya. Ngosipụta nke ọnọdụ ndị a na-echetara mpaghara anyị nke mgbochi na njikwa njikwa ọrịa na enweghị ike izu ike.
Mgbochi ọrịa na ọnọdụ ịchịkwa ọrịa na-eweta ihe egwu nke ijikọ ndị mmadụ, ngwa ngwa na ụgbọ ala. Mpaghara anyi bu mpaghara nwere otutu onu ogugu. Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na-akwaga mba na ụmụ akwụkwọ kọleji nọ n'etiti ndị isi ise dị na mba ahụ, ma ọtụtụ n'ime ha na-aga Changzhumin agbata obi na ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ na-efe efe. Oge Ememme Mmiri na-eru nso, ụmụ akwụkwọ ga-enwe ezumike na ndị si mba ọzọ. Na nloghachi nke ndị ọchụnta ego, na oge njem njem kachasị elu nke ndị mmadụ na-abịa site na ebe ndị ọzọ na Jiangxi, ihe egwu dị iche iche na ihe ndị a na-ejighị n'aka dịka mmụba nke ndị mmadụ, nzukọ na njem na-agakọ ma na-echekwa, nke nwere ike ibute ngbasa nke mgbasa ahụ. virus na ọbụna ụyọkọ ọrịa na-efe efe.
Vaccingba ọgwụ mgbochi zuru ezu nke ndị bi na isi tupu Ememe Ememe
Oge udu mmiri na udu mmiri bu oge di oke nkpa maka mgbochi na igbochi oria ojoo. Provincegbè anyị na-etinye usoro dịgasị iche iche nke "mbubata mpụga mpụga, nkwụghachi azụ n'ime", na akọ, dị ka ọ malitere, na-ejide normalization na nkenke ntiwapụ ọrịa na njikwa, na-aga n'ihu na-eme ka nsogbu ahụ merie na Mgbochi Ọrịa na njikwa nsonaazụ.
Jiri nlezianya dozie mgbochi na ịchịkwa oyi na mmiri ọrịa. Kemgbe mmalite nke oge oyi, mpaghara anyị enweela nzukọ pụrụ iche dị iche iche iji mụọ ma debe mgbochi na ịchịkwa ọrịa na-efe efe n'oge oyi na mmiri, na-ahazi ma dozie isi okwu, ma na-akwalite ụlọ ọrụ iwu mpaghara na ọkwa niile iji banye steeti oge agha. Kemgbe Disemba 2020, mpaghara anyị ewepụtala atụmatụ 30 nke ọma gbasara mgbochi na ịchịkwa ọrịa na-efe efe, ịgba ọgwụ mgbochi, nyocha acidic na ụlọ ọgwụ na-ekpo ọkụ, usoro ọgwụgwọ ọgwụ, ihe mberede, na iwusi mgbochi na mgbochi ọrịa n'oge duringbọchị Afọ Ọhụrụ. na Ememme Oge opupu ihe ubi. Atụmatụ a bụ iji ịnụ ọkụ n'obi na-alụso mgbochi na njikwa ọgụ n'oge oyi na oge opupu ihe ubi. N'ụbọchị Afọ Ọhụrụ, mpaghara anyị zigara ndị otu nlekọta iri na otu n'akụkụ dị iche iche nke ógbè ahụ ka ha mee nleta na-enweghị ọkwa na nke enweghị nsogbu iji kpochapụ ihe egwu dị iche iche zoro ezo nke mgbochi na njikwa ọrịa.
N'ikwekọ n'ụzọ kwekọrọ na usoro mgbochi nkwonkwo na njikwa nke Steti na njikọta nke ọgwụ mgbochi ọrịa coronavirus ọhụrụ maka ọnụọgụ ọnụọgụ ndị mmadụ, mpaghara anyị echepụtala atụmatụ ọrụ ma ọ bụ atụmatụ maka ịgba ọgwụ mgbochi, nyocha mmeghachi omume na-adịghị mma, ọgwụgwọ, na ịkwụ ụgwọ maka mmeghachi omume ndị na-adịghị mma. ụzọ abụọ Lekwasị anya na ọgwụ mgbochi. Categorydị nke mbụ bụ ndị nọ n'ihe ize ndụ dị ukwuu nke ọrịa pneumonia ọhụrụ, gụnyere ndị nwere nnukwu ihe ize ndụ na-arụ ọrụ, dị ka nyocha ihu ụzọ nke ọdụ ụgbọ mmiri na ndị ọrụ iche iche na-etinye aka na ihe ndị a na-atụ oyi, mbubata na ibudata, njikwa, njem na ndị ọzọ ndị ọrụ metụtara ya, ndị ọrụ ụgbọ njem nke mba na nke ụlọ, Ndị ọrụ, ndị ọrụ ụgbọ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri, ndị ọrụ ahụike na ahụike na-eche ihe egwu dị egwu nke ọrịa esenidụt esenidụt; ndị nọ n'ihe ize ndụ ibute ọrịa na mba ọzọ, dị ka ndị na-aga mba ọzọ maka ọrụ ma ọ bụ ọmụmụ maka ebumnuche azụmahịa ma ọ bụ nke onwe. Thedị nke abụọ bụ ndị ọrụ na ọnọdụ dị mkpa nke na-ekwe nkwa ọrụ ọha na eze, gụnyere ndị ọrụ na-elekọta mmadụ, dịka nchekwa ọha, ọkụ ọkụ, ndị ọrụ obodo, yana ndị ọrụ metụtara ya na ụlọ ọrụ gọọmentị na ụlọ ọrụ ndị na-enye ndị ọha na eze ọrụ; ndị na-ejigide nrụpụta na ọrụ obibi nke ọha mmadụ Ndị ọrụ, dị ka mmiri, ọkụ eletrik, kpo oku, kol, ndị ọrụ metụtara gas, wdg; ndị ọrụ na-elekọta mmadụ, dịka njem, lọjistik, nlekọta ndị okenye, idebe ihe ọcha, olili ozu, yana ndị ọrụ metụtara nkwukọrịta. Gbè a nwere nyocha nke ọma banyere ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ chọrọ ọgwụ mgbochi na gburugburu a ihe dị ka nde mmadụ 1.6. A malitere ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi a na mpaghara ahụ na Disemba 28, 2020. Ka ọ dị ugbu a, ngụkọta nke ndị 381,400 ka a na-agba ọgwụ mgbochi. A ga-emecha ọgwụ mgbochi nke ndị bi na ya tupu ememme oge opupu ihe ubi.
E guzobere ìgwè ndị na-ahụ maka ngwa ngwa acid nke na-ahụ maka ọnọdụ mberede
N'oge a, enwere ụlọ ọgwụ ahụ ọkụ 223 gafere nyocha na mpaghara ahụ, ọnụọgụ ngwupụta ụlọ ahụ bụ 99.5%. N'ime ha, ọnụego nnabata nke ụlọọgwụ ahụ ọkụ na ụlọ ọgwụ izugbe na ụlọ ọgwụ na-efe efe bụ 100%. Mpịakọta kwa ụbọchị acidic na-anwale ule na-abawanye na 338,000, na 6 mpaghara-larịị nucleic acid na-anwale ndị otu na-ahụ maka ihe mberede na ndị otu njikwa otu njikwa 1.
Na mgbakwunye, mpaghara anyị ga-agbasi mbọ ike iji rụọ ọrụ dị mma na ịlele ma nwalee coronavirus nucleic acid ọhụrụ nke nri ndị na-eri oyi, ka e wee nyocha mpaghara ọ bụla na ibe ọ bụla. Nọgide na-emejuputa ahụmịhe bara uru na nke bara uru nwetara na mbido, gaa n'ihu na-emeziwanye usoro nhazi, na-aga n'ihu na-ewusi "gburugburu ebe obibi" na mgbochi ike, gaa n'ihu na-ewusi mgbochi otu na njikwa otu, na-aga n'ihu na-eme ka mgbochi na njikwa ntọala, ma gbalịsie ike igbochi ma chịkwaa ọrịa udu mmiri na udu mmiri.